DEG DEG:Ciidamada Itoobiya Oo La Wareegay Garoonka Diyaaradaha Ee Magaalada Kismaayo Iyo Sobobta Oo La Shaaciyay
21/05/2019 (BNN) Wararka ka imaanaya Magaaladda Kismaayo oo xarun kumeel gaar ah u ah maamulka Jubbaland ayaa waxa ay ku soo warramayaan in Garoonka Diyaaradaha magaaladaasi ay la wareegeen Ciidamada Ethiopia,
talaabadan ayaa waxaa ay timid kadib markii ay cabasho muujiyeen Musharraxiinta u tartamaya Doorashada maamulkaasi.
Xubnahan quud dareynaya hoggaanka Jubbaland ayaa tilmaamay marka ay ka dagayaan Garoonkaasi in lagu handado, mararka qaarna ay Ciidamada ilaalada ka haya ay ula macaamilaan, si aan wanaagsanayn,
sidoo kale waxaa ay sheegeen in aysan wax Olole ah ka sameysan karin gudaha magaalada Kismaayo.
Sidoo kale Macluumaad hoose ayaa tilmaamaya Ciidamadda Ethiopia in ay la wareegi doonaan Dekedda Magaaladda Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubadda Hoose, iyo
Deegaanadda Kale ee Maamulkasi ka arimiyo.
Wakiilka Midawga Africa ee Soomaaliya, ahna Madaxa Howlgalka AMISOM Freincisco Madiera ayaa qorshuhu yahay in uu maanta safar ku gaaro magaaladaasi.
Dhawaan ayey aheyd markii ay Garoonka Diyaaradaha Kismaayo isku xabadeeyeen Ciidamada maamulka Jubaland iyo kuwo ilaalo u ah Musharrax Madaxweyne ee maamulkaasi Cabdinaasir Seeraar,
waxaana Halkaasi ka dhashay khasaaro kooban.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed (Madoobe) ayaa lagu eedeeyay in uu maroorsadey doorashada uu hadda xilkeeda ka sii dhamaanayo’ waxaa ayna hadda u egtahay in qorshahaasi
la iskaga daba yimid oo arrintu sidii hore ay ka duwanaan doonto.